ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ - Latest News
သြစတြေးလျ တောမီးသင့်ဒေသ ပြန်ထူထောင်ရန်မျှော်လင့်
ဘဂ္ဂဒက် ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း ၂ ဦး သေဆုံး၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရ
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု လျော့နည်းနေ
ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ
အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ မြန်မာနိုင် ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့်၊ ရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်‌ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ရုံတင် ဝင်ငွေ စံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကား IT ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင် ကားတကားဖြစ်တဲ့ IT Chapter Two !
Supernatural Horror အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို နာမည်ကြီး Warner Bros. ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေ တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အ ရင် IT ရုပ်ရှင်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Andy Muschietti ကပဲ ထပ်မံပြီးတော့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမရုပ်ရှင်ကား IT ထဲမှာတော့ Derry မြို့ငယ်လေးကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ခြောက်ခြားစရာ သွင်ပြင်နဲ့ မိစ်ဆာကောင်ကြီး Pennywise နဲ့ လူငယ်လေးတစုက ရင် ဆိုင်ခဲ့ကြရတာကို ရှုစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင် Chapter Two ထဲမှာတော့ အချိန် ၂၇ နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ အဲဒီမြို့ကလေးကို Pennywise ပြန်ရောက် လာသလို သူ့ကို လက်စရှင်းဖို့ အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Losers’ Club က လူငယ်လေး တွေကလည်း မြို့လေးကို ပြန်ရောက်လာကြတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ ဘယ် လို သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ဖန်တီး ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာပဲ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်မင်းသား James McAvoy ပါဝင်လာခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Jessica Chastain၊ Bill Hader၊ Isaiah Mustafa နဲ့ Jay Ryan တို့ကလည်း အတွဲ ညီညီ ပါဝင်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာ မြင်ကွင်းတွေ၊ ပြ ကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ် တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါ တယ်။
ဘတ်ဂျတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းအကုန်အကျခံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး IT ရုပ်ရှင်ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး Box Office မှာ ဝင်ငွေအမေ ရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာမို့ ခုနောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင် ကရော စံချိန်ချိုးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ယူကျုဘ်ပေါ်မှာတော့ လတ်တလောအချိန်ထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂၃ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့ပါ တယ်။
ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် ၁၇၀ ရှိတဲ့ ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ဟောလိဝုဒ် ဒရာမာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ့် Ms. Purple !
ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Electric Panda Entertainment ၊ MACRO ၊ Plan Zero Productions ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေက ပူးပေါင်းတင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Justin Chon က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုဒရာမာ ရုပ်ရှင်ကားတကားအနေနဲ့ ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲ မှာတော့ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ မောင်နှမတွေကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုပါ အတိုင်း သားပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခဲ့တာပါ။ Kasie နဲ့ Carey တို့မောင်နှမဟာ L.A က Koreatown မှာ နေထိုင်ကြပြီး မိခင်ဖြစ်သူက စွန့်ပစ်ထားခံခဲ့ရသူတွေ ဖြစ် ကြပါတယ်။ ဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းတဲ့ လောကဓံတွေကြားမှာ မတူညီတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရှင်သန်နေကြရင်း ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မောင်နှမတွေ ပြန်ဆုံမိကြတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Tiffany Chu ၊ Teddy Lee ၊ Octavio Pizano နဲ့ James Kang စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ Sundance International Film Festival မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလက ကနဦးပြသခဲ့ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိ ထားခဲ့ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၈၇ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းပစ် ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ဟောလိဝုဒ် Action Crime Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ပရိ သတ်အကြိုက် Killerman !
ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ Street Thief, Cash Only စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ နာမည် ကြီးတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Malik Bader က သူကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းခွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး Blue Fox Entertainment ကနေ တင် ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့က Money Launderer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Moe Diamond ဟာ မတော်တဆမှုတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး နိုးထလာချိန်မှာတော့ သူ့ဆီမှာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ တရားမဝင် ဒေါ်လာတွေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့ပြီး မှတ်ဉာဏ်တွေပါ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူ့ကို ဖြိုခွင်းဖို့အတွက် မသိတဲ့ သူစိမ်းရဲတစုက လိုက်လာခဲ့ ချိန်မှာတော့ အခြေအနေဟာ ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ဒါဟာ ရဲတွေရဲ့ အကွက်ချ လုပ်ကြံမှုလား၊ အဖြစ်မှန်ကို သိရဖို့ မြို့အနှံ့လိုက်ပြီး ရှာ ဖွေချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ၊ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာတွေကို ပရိသတ်တွေက ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Liam Hemsworth က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး တခြားသရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Emory Cohen ၊ Diane Guerrero ၊ Zlatko Buric ၊ Suraj Sharma နဲ့ Nickola Shreli စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ သွေးထွက်သံယိုမြင်ကွင်း တွေ၊ ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘ အုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
The Hunger Games ရုပ်ရှင် Series တွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်း သား Liam Hemsworth ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြမယ့် ဒီကားဟာ ရုံမတင်ခင် ကတည်းက ပရိသတ်တွေကြားမှာတော့ ရေပန်းစားနေခဲ့တာပါ။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၁၂ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ကတည်းက ရုံတင်ပြသနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ မြန်မာ အချစ်ဒရာမာရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစတဲ့ ခရေ !
ဒီကားကိုတော့ နဂါးမင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး မြား စစ်သည်ရဲ့ ဝတ္ထုကို ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းက ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းခွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ပုံဖော် ရိုက်ကူးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ဒရာမာဇာတ်လမ်းတပုဒ်အနေနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားထဲမှာတော့ ငယ်သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးတွေကြား သူတို့တွေ အသက် တွေ ကြီးလာကြချိန်မှာ ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် အပြောင်းအလဲတွေ၊ အချိုးအကွေ့ အလှည့် အပြောင်းတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ပရိသတ်ကြိုက် သရုပ်ဆောင် မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ မြင့်မြတ်၊ ဆန်းထွဋ်နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့က ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားကြပြီး သူတို့နဲ့ အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရေရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က ရန် ကုန်မြို့၊ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို တချိန်ကတော့ ဟိန်းဝေယံ၊ မိုးဟေကိုတို့နဲ့ ခရေပုံပြင်အမည်နဲ့ ဗွီဒီယိုအနေနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတာမို့ ခုရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ပုံဖော်ဖန်တီးမှုမှာရော ဘယ်လိုအ ပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ ရှုစားကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင် ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ့် Saaho !
Action Thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Sujeeth က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး UV Creations နဲ့ T-Series ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကြပြီးဖြစ်တဲ့ Baahubali ရုပ်ရှင် ကားတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးလက်ခံခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Prabhas က ခေါင်း ဆောင်ပါဝင်ထားပြီး သူနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Shraddha Kapoor ကလည်း အတွဲညီညီ ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ မင်းသား Prabhas ကို ရဲအရာရှိတဦးအနေနဲ့ ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ သိပ္ပံပညာရှင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးချပြီး မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းတဂိုဏ်းကို နှိမ်နင်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ကို ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးအာဏာ ပါဝါကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြား ထင်မှတ်မ ထားတဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ဉာဏ်ရည်ပါဝါ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါ ပညာသားပါပါ ရိုက်ကူး ထားတာမို့ ဘယ်သူက မုဆိုး၊ ဘယ်သူက သားကောင်ဆိုတာ မသိနိုင်ပဲ အပစ်အခတ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့အတူ ရင်တမမနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ NR အဆင့်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီး IMDb မှာ Rating6အထိ ရရှိထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ယူကျုဘ်ပေါ်မှာတော့ လတ်တလောအ ချိန်ထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် ၁၇၀ ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသနေပြီး နာမည်ကြီးနေခဲ့တာမို့ ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂.၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ Movie Crazy တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား တွေ အကြောင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း Like, Share နဲ့ Comment တွေပေးပြီး တော့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရွင်ဝါသနာအိုးတို့အတြက် ဘယ်ရုံမွာ ဘာကားတျြေပေနသလဲ
အပတ္စဉ္ပုံမွန္တင်ဆက်နေက်ျဖစ္တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ္ကနျေမန္မာနိုင် ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမွာ ရုံတင်ျပသေတာ့မယ့်၊ ရုံတင်ျပသေနဆျဲဖစ္တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ် ရွင္ဇာတ္ကားတြေ အေကြာင်းကို ရြေးခ်ယ်ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်။
မူဗီခေရဇီတြေကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ျေပျာပေပးခ်င္တဲ့ ရုပ်ရွင္ကေတာ့ ရုံတင် ဝင်ငြေ စံခ်ိန္ခ်ိုးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရွင္ကား IT ရဲ့ နောက်ဆက္တြဲရုပ်ရွင် ကားတကာျးဖစ္တဲ့ IT Chapter Two !
Supernatural Horror အမ်ိုးအစား ရုပ်ရွင္ကားတကာျးဖစ္တဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကားကို နာမည်ကြီး Warner Bros. ရုပ်ရွင္ထုတ္လုပ်ရေးကေန တင်ဆက္လိုက္တျာဖစ်ပြီး အ ရင် IT ရုပ်ရွင္ကားကို ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ အာဂ်င္တီးနားရုပ်ရွင္ဒါရိုက္တာ Andy Muschietti ကပဲ ထပ္မံပြီးတော့ ပုံဖော်ရိုက္ကူးပေးထားတျာဖစ္ပါတယ်။
ပထမရုပ်ရွင္ကား IT ထဲမွာတော့ Derry မြို့ငယ်လေးကို ရောက်ရွိလာခဲ့တဲ့ျေခာက်ျခားစရာ သြင်ျပင္နဲ့ မိစ္ဆာကောင်ကြီး Pennywise နဲ့ လူငယ်လေးတစုက ရင် ဆိုင္ခဲ့ကြရတာကို ရှုစားခဲ့ကြရတျာဖစ္ပါတယ်။ နောက်ဆက္တြဲရုပ်ရွင် Chapter Two ထဲမွာတော့ အခ်ိန် ၂၇ နွစ်ကြာပြီးနောက္မွာ အဲဒီမြို့ကေလးကို Pennywiseျပန်ရောက် လာသလို သူ့ကို လက္စရွင်းဖို့ အရယ်ြရောက္ခဲ့ပျြီဖစ္တဲ့ Losers’ Club က လူငယ်လေး တြေကလည်း မြို့လေးကျိုပန်ရောက္လာကြတဲ့အခါ ဘာတြေဆက်ျဖစ္လာမလဲ။ ဘယ် လို သြေးပ်က္ထိတ္လန့္စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ္လမ်းဇာတ္ကြက်တြေနဲ့ ပုံဖ္ဖောန္တီး ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင္မွာပဲ ပရိသတ်တြေက ရှုစားကြရမျွာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာတော့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင္မင်းသား James McAvoy ပါဝင္လာခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူ တျခားသရုပ်ဆောင္မင်းသားမင်းသမီးတျြေဖစ်ကြတဲ့ Jessica Chastain၊ Bill Hader၊ Isaiah Mustafa နဲ့ Jay Ryan တို့ကလည်း အတြဲ ညီညီ ပါဝင္ထားခဲ့ကြတျာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ သြေးပ်က္ထိတ္လန့္စရျာမင္ကြင်းတြေ၊ျပ ကြင်ျးပကြက်တြေနဲ့ျေပာစကား Dialog တြေက အသက် ၁၇ နွစ်အောက် ကေလးငယ် တြေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တ္တောာမို့ ဒီကားကို ကြည့္မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ္ထိန်းသူ ခြင့်ျပုခ်က် Guideline နဲ့မွ ကြည့်ရှုသင့္တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ္မွတ္ထားပါ တယ်။
ဘတ္ဂ်တ် အေမရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းအကုန်အက်ခံရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး IT ရုပ်ရွင္ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ရုံတင်ျပသခဲ့ပြီး Box Office မွာ ဝင်ငြေအေမ ရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ကေ်ာ်ရရွိခဲ့ပြီး စံခ်ိန္တင်နိုင္ခဲ့တာမို့ ခုနောက်ဆက္တြဲရုပ်ရွင် ကေရာ စံခ်ိန္ခ်ိုးနိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ပရိသတ်တြေက စိတ်ဝင္စားနေကြပါတယ်။
ဒီရုပ်ရွင္ကား Trailer ဟာ ယူက်ုဘ်ပေါ်မွာတော့ လတ္တေလာအခ်ိန္ထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂၃ သန်းကေ်ာ် ရွိနေခဲ့ပါ တယ်။
ကျြာမင့္ခ်ိန် မိနစ် ၁၇၀ ရွိတဲ့ ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် စက္တင္ဘာလ ၆ ရက် နေ့မွာ ရုံတင်ျပသေတာ့မျွာဖစ္ပါတယ်။
နောက္ထပ် မိတ်ဆက်ျေပျာပေပးခ်င္တဲ့ ရုပ်ရွင္ကေတာ့ ဟောလိဝုဒ် ဒရာမာ ရုပ်ရွင္ပရိသတ်တြေ ကြိုက်နွစ်သက်ကြမယ့် Ms. Purple !
ဒီရုပ်ရွင္ကားကိုတော့ Electric Panda Entertainment ၊ MACRO ၊ Plan Zero Productions ရုပ်ရွင္ထုတ္လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတြေက ပူးပေါင်းတင်ဆက္လိုက္တျာဖစ်ပြီး ဒါရိုက္တာ Justin Chon က ရိုက္ကူးပုံဖော်ပေးထားတျာဖစ္ပါတယ်။
မိသားစုဒရာမာ ရုပ်ရွင္ကားတကားအေနနဲ့ ဖန္တီးပုံဖ္ထောားတဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကားထဲ မွာတော့ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ မောင်နွမေတြကြားက ခ်စ်ျခင်းမေတ္တာတြေကိုပါ အတိုင်း သားပေါ်လြင်အောင် ရိုက္ကူးတင်ဆက္ထားခဲ့တာပါ။ Kasie နဲ့ Carey တို့မောင်နွမဟာ L.A က Koreatown မွာ နေထိုင်ကြပြီး မိခင်ျဖစ်သူက စြန့္ပစ္ထားခံခဲ့ရသူတျြေဖစ် ကြပါတယ်။ ဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းတဲ့ လောကဓံတြေကြားမွာ မတူညီတဲ့ အခက်အခဲတြေနဲ့ ရွင်သန်နေကြရင်း ဖခင်ျဖစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးအခ်ိန္မွာ မောင်နွမေတျြပန်ဆုံမိကြတဲ့ အေကြာင်းတြေကို ဒီကားထဲမွာ ပရိသတ်တြေက ရှုစားကြရမျွာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာတော့ သရုပ်ဆောင္မင်းသားမင်းသမီးတျြေဖစ်ကြတဲ့ Tiffany Chu ၊ Teddy Lee ၊ Octavio Pizano နဲ့ James Kang စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တြေ ပါဝင္ထားကြ တျာဖစ္ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရွင္ကားကို နာမည်ကြီး ရုပ်ရွင္ပြဲတ္တောချုဖစ္တဲ့ Sundance International Film Festival မွာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလက ကနဦျးပသခဲ့ပြီး ခ်ီးက်ူးမှုတြေလည်း ရရွိ ထားခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီးရုပ်ရွင် Review Website တချုဖစ္တဲ့ Rotten Tomatoes မွာတော့ 100 % Rating ရရွိထားပါတယ်။
ကျြာမင့္ခ်ိန် ၈၇ မိနစ်ရွိတဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကားကိုတော့ လာမယ့် စက္တင္ဘာလ ၆ ရက်နေ့မွာ ရုံတင်ျပသေတာ့မျွာဖစ္ပါတယ်။
နောက္ထပ် မိတ်ဆက်ျေပျာပေပးခ်င္တဲ့ ရုပ်ရွင္ကေတာ့ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းပစ် ခတ္တိုက္ခိုက္မှုတြေနဲ့ ဟောလိဝုဒ် Action Crime Drama အမ်ိုးအစား ရုပ်ရွင္ပရိ သတ်အကြိုက် Killerman !
ဒီရုပ်ရွင္ကားကေတာ့ Street Thief, Cash Only စတဲ့ ရုပ်ရွင္ကားတြေနဲ့ နာမည် ကြီးတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရွင္ဒါရိုက္တာ Malik Bader က သူကိုယ္တိုင် ဇာတ်ညွှန်းခြဲပြီး ကိုယ္တိုင္ပဲ ရိုက္ကူးပုံဖော်ပေးထားတျာဖစ်ပြီး Blue Fox Entertainment ကေန တင် ဆက္လိုက္တျာဖစ္ပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့က Money Launderer တေယာက်ျဖစ္တဲ့ Moe Diamond ဟာ မေတ္တာဆမှုတချုဖစ္ခဲ့ပြီး နိုးထလာခ်ိန္မွာတော့ သူ့ဆီမွာ သန်းနဲ့ခ်ီတဲ့ တရားမဝင် ဒေါ်လာတြေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတြေနဲ့အတူ ရွိနေခဲ့ပြီး မွတ်ဉာဏ်တြေပါ ပေ်ာက်ဆုံးနေခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သူ့ကို ဖြိုခြင်းဖို့အတြက် မသိတဲ့ သူစိမ်းရဲတစုက လိုက္လာခဲ့ ခ်ိန္မွာတော့ အျေခအေနဟာ ပိုပြီး ရှုပ်ထြေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဘာကြောင့်ျဖစ်ရတာလဲ။ ဒါဟာ ရဲတြေရဲ့ အကြက္ခ် လုပ်ကြံမှုလား၊ အျဖစ္မွန္ကို သိရဖို့ မြို့အနွံ့လိုက်ပြီး ရွာ ဖြေခ်ိန္မွာတော့ ဘယ္လိုအခက်အခဲတြေ၊ အန္တရာယ်တြေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာတြေကို ပရိသတ်တြေက ဒီကားထဲမွာ ရှုစားကြရမျွာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာတော့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင္မင်းသား Liam Hemsworth က ခေါင်းဆောင္ပါဝင္ထားပြီး တျခားသရုပ်ဆောင္မင်းသားမင်းသမီးတျြေဖစ်ကြတဲ့ Emory Cohen ၊ Diane Guerrero ၊ Zlatko Buric ၊ Suraj Sharma နဲ့ Nickola Shreli စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တြေလည်း ပါဝင္ထားကြတျာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တိုက္ခိုက္မှုတြေ၊ သြေးထြက်သံယျိုမင္ကြင်း တြေ၊ ဇာတ်ဝင္ခန်ျးမင္ကြင်းတြေ၊ျေပာစကား Dialog တြေက အသက် ၁၇ နွစ်အောက် ကေလးငယ်တြေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တ္တောာမို့ ဒီကားကို ကြည့္မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘ အုပ္ထိန်းသူခြင့်ျပုခ်က် Guideline နဲ့မွ ကြည့်ရှုသင့္တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ္မွတ် ထားပါတယ်။
The Hunger Games ရုပ်ရွင် Series တြေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင္မင်း သား Liam Hemsworth ပရိသတ်တြေ အကြိုက်တြေ့ကြမယ့် ဒီကားဟာ ရုံမတင္ခင် ကတည်းက ပရိသတ်တြေကြားမွာတော့ ရေပန်းစားနေခဲ့တာပါ။
ကျြာမင့္ခ်ိန် ၁၁၂ မိနစ်ရွိတဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကားကိုတော့ အေမရိကန်နိုင်ငံမွာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ္လ ၃၀ ရက်နေ့ကတည်းက ရုံတင်ျပသေနတျာဖစ္ပါတယ်။
မူဗီခေရဇီတြေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ျေပျာပေပးခ်င္တဲ့ ရုပ်ရွင္ကေတျာ့မန္မာ အခ်စ္ဒရာမာရုပ်ရွင္ကားတကာျးဖစတဲ့ ခေရ !
ဒီကားကိုတော့ နဂါးမင်း ရုပ်ရွင္ထုတ္လုပ်ရေးက တင်ဆက္လိုက္တျာဖစ်ပြီျးမား စစ်သည်ရဲ့ ဝတ္ထုကို ဒါရိုက္တာ ဝိုင်းက ကိုယ္တိုင္ဇာတ်ညွှန်းခြဲပြီး ကိုယ္တိုင္ပဲ ပုံဖော် ရိုက္ကူးထားခဲ့တျာဖစ္ပါတယ်။
အခ်စ္ဒရာမာဇာတ္လမ်းတပုဒ်အေနနဲ့ ပုံဖော်ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဒီကားထဲမွာတော့ ငယ်သူငယ္ခ်င်း ၂ ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်နွောင်ကြိုးတြေကြား သူတို့တြေ အသက် တြေ ကြီးလာကြခ်ိန္မွာ ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် အျေပာင်းအလဲတြေ၊ အခ်ိုးအေကြ့ အလွည့် အျေပာင်းတြေနဲ့အတူ ပရိသတ်တြေက ရှုစားကြရမျွာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာတော့ ပရိသတ်ကြိုက် သရုပ်ဆောင် မင်းသားမင်းသမီးတျြေဖစ်ကြ တျဲ့မင့်ျမတ်၊ ဆန်းထြဋ္နဲ့ ဝတ္မှုန်ရွှေရည္တို့က ခေါင်းဆောင် ပါဝင္ထားကြပြီး သူတို့နဲ့ အတူ တျခားသရုပ်ဆောင်တြေလည်း အမ်ားကြီး ပါဝင္ထားကြတျာဖစ္ပါတယ်။
ခေရရုပ်ရွင္ကားရဲ့ အထူးပျြဲပသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ္လ ၂၁ ရက်နေ့က ရန် ကုန်မြို့၊ သမ္မတ ရုပ်ရွင်ရုံမျွာပုလုပ္ခဲ့တျာဖစ္ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရွင္ကားကို တခ်ိန္ကေတာ့ ဟိန်းဝေယံ၊ မိုးဟေကိုတို့နဲ့ ခေရပျုံပင်အမည္နဲ့ ဗြီဒီယိုအေနနဲ့ ရိုက္ကူးခဲ့ဖူးတာမို့ ခုရုပ်ရွင်အေနနဲ့ ပုံဖ္ဖောန္တီးမှုမွာရော ဘယ္လိုအျေပာင်းအလဲတြေနဲ့ ရိုက္ကူးထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင္မွာ ရှုစားကြရေတာ့မျွာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် စက္တင္ဘာလ ၅ ရက်နေ့မွာ ရုံတင်ျပသေတာ့မျွာဖစ် ပါတယ်။
မူဗီခေရဇီတြေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ျေပျာပေပးခ်င္တဲ့ ရုပ်ရွင္ကေတာ့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရွင် ပရိသတ်တြေ ကြိုက်နွစ်သက်ကြမယ့် Saaho !
Action Thriller အမ်ိုးအစား ရုပ်ရွင္ကားတကာျးဖစ္တဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကားကိုတော့ အိန္ဒိယရုပ်ရွင္ဒါရိုက္တာ Sujeeth က ရိုက္ကူးပုံဖော်ပေးထားတျာဖစ်ပြီး UV Creations နဲ့ T-Series ရုပ်ရွင္ထုတ္လုပ်ရေးတို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက္လိုက္တျာဖစ္ပါတယ်။
ဒီကားထဲမွာတေျာ့မန္မာပရိသတ်တြေ ရင်းနွီးကြပြီျးဖစ္တဲ့ Baahubali ရုပ်ရွင် ကားတြေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးလက္ခံခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင္မင်းသား Prabhas က ခေါင်း ဆောင္ပါဝင္ထားပြီး သူနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင္မင်းသမီး Shraddha Kapoor ကလည်း အတြဲညီညီ ပါဝင္ထားကြတျာဖစ္ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရွင္ကားထဲမွာတော့ မင်းသား Prabhas ကို ရဲအရာရွိတဦးအေနနဲ့ ရှုစားကြရမျွာဖစ်ပြီး ဖခင်ျဖစ်သူ သိပ္ပံပညာရွင္တီထြင္ခဲ့တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးခ်ပြီး မူးယစ်မွောင္ခိုဂိုဏ်းတဂိုဏ်းကို နွိမ္နင်းတဲ့ အေကြာင်းတြေ ကို ရှုစားကြရမျွာဖစ္ပါတယ်။ ရာထူးအာဏာ ပါဝါကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တြေကြား ထင္မွတ္မ ထားတဲ့ လွည့္ကက်ြတြေနဲ့ ဉာဏ်ရည္ပါဝါ ပြိုင်ဆိုင္မှုတြေကိုပါ ပညာသားပါပါ ရိုက္ကူး ထားတာမို့ ဘယ်သူက မုဆိုး၊ ဘယ်သူက သားကောင်ဆိုတာ မသိနိုင္ပဲ အပစ်အခတ် ဇာတ္လမ်းဇာတ္ကြက်တြေနဲ့အတူ ရင္တမမနဲ့ ရှုစားကြရမျွာဖစ္ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရွင္ကားကိုတော့ NR အဆင့်သတ္မွတ္ထားတျာဖစ်ပြီး IMDb မွာ Rating6အထိ ရရွိထားတဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကား Trailer ဟာ ယူက်ုဘ်ပေါ်မွာတော့ လတ္တေလာအ ခ်ိန္ထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ခ်ီ ရွိနေခဲ့တျာဖစ္ပါတယ်။
ကျြာမင့္ခ်ိန် မိနစ် ၁၇၀ ရွိတဲ့ ဒီရုပ်ရွင္ကားကိုတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမွာ သြဂုတ္လ ၃၀ ရက်နေ့မွာ စတင်ပြီး ရုံတင်ျပသေနပြီး နာမည်ကြီးနေခဲ့တာမို့ ပရိသတ်တြေအတြက် တင်ဆက်ပေးလိုက္ပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ္ကို အပတ္စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတြေမွာ DVB TV channel ကေန ပုံမွန္တင်ဆက်ပေးနေတျာဖစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတြေအတြက် ကြာသပေတးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂.၄၅ နာရီ၊ စေနေန့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မျွာပန္လည် ထုတ္လွှင့်ျပသေပးနေတျာဖစ္ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ္မွာ Movie Crazy တြေအတြက် နိုင်ငံတကာနျဲ့မန္မာရုပ်ရွင္ကား တြေ အေကြာင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရြေးခ်ယ္တင်ဆက်ပေးနေတျာဖစ်ပြီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမ်က်နွာကေနတဆင့္လည်း Like, Share နဲ့ Comment တြေပးပြီး တော့ အားပေးနိုင္ပါတယ်။
Tags: ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏သင်္ကေတအဖြစ် ရှုမြင်ခံရသော ၁၅ ထပ်အဆောက်အအုံကို ဖြိုချ
ခိုင်မာသည့်ဈေးကွက်ဖြစ်ရေး အကောင်ထည်ဖော်ရန် မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်များကို ဝန်ကြီးချုပ်...